April 2020 - Shop
Shop > All Articles > 2020 > April
အမေများနေ့တွင် ချစ်ခြင်းမေတ္တာကို ဖော်ပြရန်အတွက် အကောင်းဆုံးလက်ဆောင်လေးများ ….0688
မေလ (၁၀) ရက်နေ့မှာ ကျရောက်လာမယ့် အမေများနေ့မှာ ကျွန်ုပ် တို့ရဲ့ ချစ်ခြင်းမေတ္တာတွေကို အကောင်းမွန်ဆုံးဖော်ပြကြမှာပါ။ မွေးကျေးဇူးကုန်အောင် မဆပ်နိုင်သော်ငြားလည်း ကျွန်ုပ်တို့ကို ချစ်ခြင်းမေတ္တာတွေပေးတဲ့ အမေ့မေတ္တာတွေကို ဒီရက်လေးမှာ အမေ့ကိုလက်ဆောင်လေးပေးရင်းနဲ့ ပျော်ရွှင်စရာ အမှတ်တရနေ့ကို ဖန်တီးလိုက်ကြရအောင် .. …
📷ကင်မရာတွေနဲ့ ပတ်သတ်ပြီး သင်ဘယ်လောက်သိလဲဆိုတာဒီမေးခွန်းလေးတွေဖြေပြီး စမ်းသပ်ကြည့်ရအောင်…📷0397
The KaungHtet April 30, 2020 7:25 am April 30, 2020
CAMERA ဟူသောစကားလုံးသည်လက်တင်စကားလုံး“ camera obscura” မှဆင်းသက်လာတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒီစကားလုံးတွေကဘာကိုဆိုလိုတာလဲဆိုတော့ ကျွန်ုပ်တို့၏တစ်သက်တာ၌အဖိုးတန်သောအချိန်လေးများကိုမှတ်တမ်းတင်ရန်အတွက် ကင်မရာများကို အသုံးပြုခြင်း လို့ဆိုတာပါ။ ကဲအဲ့တာဆိုရင်တော့ ကင်မရာတွေအကြောင်းကို ဘယ်လောက်သိလဲ ဆိုတာကိုဒီမေးခွန်းလေးတွေကို အခု့ပဲဖြေပြီးစမ်းသပ်လိုက်ရအောင်…
အွန်လိုင်းမှ သင့်ရဲ့ ဖုန်းနှင့် ဖုန်းဆက်စပ်ပစ္စည်းများ ရောင်းချမှုကို တိုးတက်အောင် ပြုလုပ်ကြမယ် …0383
The KaungHtet April 29, 2020 1:42 pm May 8, 2020
လက်ကိုင်ဖုန်းတွေဟာအမြဲတမ်းကြီးမားတဲ့စျေးကွက်တစ်ခုပါပဲ။ မိုဘိုင်းဖုန်းအသုံးပြုသူများဟာ ပိုမိုကောင်းသောအင်္ဂါရပ်တွေ၊ စျေးနှုန်းတွေနဲ့ ဖုန်းအသစ်များကိုအမြဲတမ်းရှာဖွေနေကြပါတယ်။ ထိုသို့ပြောခြင်းအားဖြင့်မိုဘိုင်းဖုန်းရောင်းချခြင်းလုပ်ငန်းကို ၀င်ရောက်ခြင်းသည်အကျိုးအမြတ်များမည်မှာသေချာသည်။ ဒါပေမယ့်လည်း သင်ဟာ ဖုန်းများရောင်းနေသည်ဆိုပါစို့ သင်အမှန်တကယ် လိုချင်သောဝင်ငွေကို ရရန်မလုံလောက်ပါဖူး။ နောက်ဆုံးမှာတော့ သင်၏ကုန်ကျစရိတ်တွေက မြင့်မားနေပြီးတော့ ဖုန်းများရောင်းချရန် ဝယ်ယူသော ကုန်ကျစရိတ်မှာ ပို၍ …
🥩အသားကင်စက်တွေအသုံးပြုပြီး အသား၊ငါးတွေက်ု ဘယ်လိုကင်စားကြမလဲ🥩0717
The KaungHtet April 29, 2020 9:57 am April 29, 2020
အသားကင်တွေကို အရသာရှိရှိစားနိုင်ဖို့အတွက် အသားကင်စက်တွေလိုအပ်ပါတယ်။ အသားကင်စက်တွေမှာ အသားတွေအပြင် နံရိုးကင်တွေ ငါးကင်တွေပါလုပ်လို့ရပါသေးတယ်။ မိသားစုနဲ့ အတူတူစုပြီး ကင်စားတာပဲဖြစ်ဖြစ် တစ်ယောက်ထဲကင်စားတာပဲဖြစ်ဖြစ် သင့်တော်တဲ့ အသားကင်စက်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဆိုရင် အသားကင်စက်နဲ့ အသားငါးတွေကို ဘလိုကင်ရမလဲဆိုတော့ ပထမဦးဆုံး အသားကင်မယ်ဆိုရင် ကင်မည့်အသားကင်ကို …
How to Improve Your Mobile Phone Business Online0399
The KaungHtet April 28, 2020 1:00 pm May 8, 2020
Mobile phones has always beenahuge market. Mobile phone users are always on the lookout for new phones with …
သင်နဲ့ အလိုက်ဖက်ဆုံး ဖက်ရှင်ပုံစံက ဘာလဲ …01148
The KaungHtet April 28, 2020 8:45 am January 14, 2022
ဖက်ရှင်ဆိုတာ ယနေ့ခေတ်ရေစီးကြောင်းမှာ အရေးကြီးတဲ့အရာပါ။ လူငယ်လူကြီးတွေကြား ဖက်ရှင်တွေကို ဆန်းပြားစွာနဲ့ အရောင်အသွေးစုံစွာ မြင်ရတဲ့အတွက်ကြောင့် သင့်အတွက် ဘယ်ဖက်ရှင်တွေက သင်နဲ့ အလိုက်ဖက်ဆုံးလဲဆိုတာ ညွှန်းဆိုမို့အတွက် ခက်ခဲလှပါတယ် ။ဒီတော့ သင့်ရဲ့ ကြိုက်နှစ်သက်မှုတွေနဲ့ ကိုက်ညီတဲ့အရာတွေကို ရွေးချယ်ပြီး သင်နဲ့ …
🚚Shop မှ ပစ္စည်းတွေကို မြန်မာနိုင်ငံနေရာအနှံ့အပြားသို့ ပြန်လည်ပို့ဆောင်ပေးနေပါပြီ🚚0903
The KaungHtet April 28, 2020 3:56 am May 11, 2020
ကိုရိုနားဗိုင်းရပ်စ်( Covid 19 ) ရောဂါကြောင့် စျေးဝယ်သူများအန္တရာယ်ကင်းရှင်းစေရန် အတွက် မြို့များကိုကန့်သတ်၍ ပစ္စည်းများပို့ဆောင်ပေးရာမှ ယခု့အခါ အောက်ပါမြို့များသို့ပြန်လည်ပို့ဆောင်ပေးနေပါပြီ… ကချင် မိုးညှင်း မြစ်ကြီးနား ဗန်းမော် တနင်္သာရီ မြိတ် ကော့သောင်း ထားဝယ် နေပြည်တော် …
Daraz CEO Bjarke Mikkelson Exclusively in Conversation with Bloomberg News0351
The KaungHtet April 27, 2020 10:47 am April 28, 2020
On 22nd April 2020, Daraz Founder and CEO, Bjarke Mikkelson, had an exclusive discussion with Bloomberg News. In the conversation, Bjarke …
မေးခွန်းတွေဖြေပြီး မိုလ်ဘိုင်းဖုန်းဂိမ်းတွေအကြောင်း လေ့လာကြည့်ရအောင်0934
သင်သာ ဂီတပညာရှင်ဆိုရင် သင်နှင့်အလိုက်ဖက်ဆုံး တူရိယာက??0890
The KaungHtet April 24, 2020 8:04 am January 14, 2022
ဂီတဆိုတာ သင်တို့ရဲ့ ပျော်ရွှင်ခြင်း၊ ဝမ်းနည်းခြင်းတွေကို ဝေမျှခံစားပေးတဲ့အရာပဲဖြစ်ပါတယ်။ သင်သာ ဂီတကိုနှစ်သက်တယ်ဆိုရင် ဂီတကို ဖန်တီးပေးတဲ့ တူရိယာလေးတွေကို တီးရတာ စိတ်ဝင်စားမှာ အမှန်ပဲပေါ့။ ဒါ့ကြောင့် သင်နှင့်ကိုက်ညီတဲ့ တူရိယာလေးကို အခုပဲ ရှာဖွေကြည့်လိုက်ပါတော့နော် 🛡 Shop.com.mm …
၃ သိန်းကျပ်အောက် Samsung တံဆိပ်ဖုန်းများ 3808